Oktobra vato teraka. Tourmaline sy opal. Vaovao farany 2021
Tourmaline ary Opal dia ny firavaka vato roa ho an'ny Oktobra, araka ny lisitra taloha sy maoderina miloko oct teraka. Ny vatosoa prefet ho an'ny peratra firavaka amin'ny volana Oktobra, haba-tànana, kavina ary rojo.
Inona no dikan'ny vato teraka Oktobra?
Ny vato teraka dia vatosoa izay mifandray amin'ny volana nahaterahana Oktobra: Tourmaline ary Opal.
Inona no loko niavian'ny Oktobra?
Aiza no ahitana ny vato nahaterahana Oktobra?
Inona no firavaka Oktobra teraka?
Aiza no hahitana ny vato teraka Oktobra?
Inona avy ireo famantarana ny zodiaka amin'ny vato teraka Oktobra?
Kristaly kristaly boron silicate mineraly mifangaro amin'ny singa toy ny alimo, vy, manezioma, sodium, lithium, na potassium. Tourmaline dia sokajiana ho vato semi-sarobidy ary ny vato soa dia hita amin'ny loko isan-karazany.
Opal dia silika amôrômbô mandevona. Ny haavon'ny rano ao aminy dia mety ho 3 ka hatramin'ny 21% ny lanjany, fa eo anelanelan'ny 6 sy 10% matetika. Noho ny toetrany tsy amboarina dia sokajina ho mineraloid izy io, tsy toy ny endrika silika silila, izay sokajiana ho mineraly. Napetraka amin'ny mari-pana somary ambany izy io ary mety hitranga any amin'ny totohondry saika karazana vato rehetra, izay matetika no ahitana limonite, sandstone, rhyolite, marl, ary basalt.
Ny vato semi-sarobidy tourmaline mitombo amin'ny loko maromaro, manomboka amin'ny mainty ka hatramin'ny manga ka hatramin'ny mavokely. Na dia azo hazavaina amin'ny alàlan'ny fananganana mineraly vato aza ny fahasamihafana amin'ny lokon'ny vato teraka, oktobra, ny sasany mino fa tourmaline ny dikany sy ny fampiasana ny loko isan-karazany dia mety miovaova arakaraka ny volony.
Ankoatr'ireo karazana vatosoa Oktobra izay mampiseho loko miloko, ireo karazan'olon-tsotra iraisana Opal ampidiro ny ronono Opal, milky bluish ho maintso. Resin Opal, izay mavo-tantely misy famirapiratana mamiratra. Fire Opal dia mangarahara amin'ny translucent Opal, miaraka amin'ny loko mafana amin'ny mavo ka hatramin'ny volomboasary. Na dia tsy mampiseho lalao miloko matetika aza izy io, dia hisy vato miseho mamirapiratra maitso mavana indraindray.
Gem sy specimen tourmaline dia trandrahana indrindra any Brezila sy Afrika. Ny fitaovana fametrahana placer mety amin'ny fampiasana vatosoa dia avy any Sri Lanka sy India. Ankoatra an'i Brezila, tourmaline dia trandrahana any Tanzania, Nizeria, Kenya, Madagascar, Mozambika, Namibia, Pakistan, Afghanistan, India, Sri Lanka, Nosy Belitung - Indonezia ary Malawi.
Australian Opal matetika no voatonona ho tsara indrindra eran'izao tontolo izao Opal. I Etiopia no tena loharano lehibe. Fire Opal miseho amina habe sy karazany maro ao afovoan'i Mexico. Famatsiam-bola lehibe hafa an'ny Opal manerana an'izao tontolo izao dia hita any amin'ny Repoblika Tseky, Kanada, Slovakia, Hongria, Torkia, Indonezia, Brezila, Honduras, Guatemala ary Nikaragua.
Ny firavaka teraka dia vita amin'ny tourmaline ary Opal. Izahay dia mivarotra peratra firavaka, fehin-tànana, kavina, rojo, sns, amin'ny Oktobra.
Misy tsara tourmaline ary Opal amidy ao amin'ny fivarotanay
Tourmaline dia heverina fa mitondra hery manasitrana any amin'ny mpanao shaman na mpitsabo. Vatosoa vatosoa Oktobra mora raisina izy io, izay midika fa mampitony, mampitony, anaty, ary andriamby, mampiroborobo ny fisaintsainana, ara-panahy, fahendrena ary mistika.
Ny Opal dia nifamatotra tamin'ny fitiavana sy ny filan'ny nofo ary koa ny faniriana sy ny erotisma. Izy io dia vato mamitaka izay manamafy ny toe-po mampihetsi-po sy mamoaka fanakanana. Izy io koa dia afaka miasa ho toy ny stabilizer ara-pientanam-po. Ny fanaovana opal dia voalaza fa hitondra fahatokiana sy fahatokiana.
Ny vato Libra sy Scorpio dia vato nateraky ny oct.
Na inona na inona ianao Libra na Scorpio. Tourmaline ary Opal no vato manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 31 Oktobra.
Oktobra 1 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 2 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 3 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 4 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 5 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 6 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 7 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 8 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 9 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 10 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 11 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 12 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 13 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 14 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 15 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 16 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 17 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 18 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 19 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 20 Libra Tourmaline ary Opal
Oktobra 21 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 22 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 23 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 24 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 25 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 26 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 27 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 28 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 29 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 30 Scorpio Tourmaline ary Opal
Oktobra 31 Scorpio Tourmaline ary Opal
Vato fahaterahana Oktobra voajanahary amidy ao amin'ny fivarotana vatosinay